Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → novembre → 28 → Sainte – Marie : Tera-tany frantsay mamo, maty an-drano navadiky ny lakana…
Omaly alahady tokony tamin’ny 5ora maraina, tera-tany frantsay miala sasatra ao amin’ny nosy Sainte-Marie no maty navadiky ny lakana izay nitondra azy hihazo ny nosy kely “Ile aux Nattes” misy ny trano fandraisam-bahiny nipetrahany, Rouviere Jean Francois no anarany ary 63 taona.
Ny fanazavana marim-pototra voaray avy any an-toerana, dia nivoaka namonjy trano fimamoana sy fandihizana ny sabotsy alina ity tera-tany frantsay maty ity sy ireo namany roa lahy, izay samy miala sasatra ao Sainte-Marie ary samy mipetraka amin’ny trano fandraisam-bahiny ao amin’ny Ile aux Nattes. Ny alahady maraina mbola ao anatin’ny hamamoana izy telo lahy dia nitaingina lakana tahaka ny fanaony isan’andro, tamin’ity fotoana ity anefa somary ratsy ny ranomasina vokatry ny rivotra, izy ireo rahateo koa mamo ka tsy nahay nipetraka tao anaty lakana, nivadika no niafarany ka maty vokatr’ izany ingahy Rouviere Jean Francois, ireo namany roa lahy sy ilay mpivohy lakana kosa avotra. Raha ny angom-baovao dia eo am-pamaranana ny fialan-tsasatra ataony ao Sainte-Marie ity tera-tany frantsay 63 taona maty nivadika tamin’ny lakana, omaly alahady vao mangiran-dratsy ity.
Napetraka eo anivon’ny “consul honoraire”-n’i Frantsa ao Sainte-Marie ny fatiny nanomboka omaly. Manamafy ny kaomisera Lapely any an-toerana fa fahafatesana noho ny fivadihan’ny lakana nitondra azy no anton’izao raharaha izao, izay nanafarany ireo mpiala sasatra mba tsy ho tia rano raha avy nisotro zava-mahamamo, fa mampidi-doza amin’ny tsy ampoizina tahaka izao.